AmaNgqina kaYehova eAsia nakuMbindi-Mpuma
KwaSirayeli: Ukushumayela ngoBukumkani bukaThixo ngetablet
ABEMI 4 409 131 383
ABAVAKALISI 718 716
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 766 364
Iiyure Ezilikhulu Zimela Iminyaka Elikhulu
Kwelinye ilizwe laseAsia, umdlali weqonga kamabonwakude okwangunobuhle odumileyo wamkela isifundo seBhayibhile. Ngoko nangoko waqalisa ukusebenzisa oko wayekufunda waza watshisa iincwadi zakhe zemimoya nezithixo zakhe zobuBhuda.
Omnye wabantu asebenza nabo wamcenga esithi: “Kutheni ungakhe uyeke ukufunda iBhayibhile iminyaka nje emithathu uzokwazi ukujongana nomsebenzi wakho? Emva koko usenokuqhubeka ke ufunda iBhayibhile.”
Eli bhinqa laphendula lathi: “Ndiye ndalinda iminyaka eyi-24 ukuze ndimfumane uYehova. Kutheni ndizokuyeka ukufunda ngaye eminye iminyaka emithathu?”
Kanye ngeveki awayeza kuqala ngayo ukuba kwiSikolo Sobulungiseleli Sobuthixo, wafowunelwa yinkampani yeefilimu. Yamthembisa umsebenzi weminyaka emine onentlawulo encumisayo, kodwa kwakufuneka adlale nawuphi na umlinganiswa. Zange awamkele loo msebenzi. NgoMeyi 2014, waba ngumvakalisi ongabhaptizwanga yaye njengoko uAgasti wayesondela, wagqiba ekubeni ashumayele iiyure eziyi-100 ngaloo nyanga. Xa wabuzwa isizathu sokuba enze oko wathi, “Ndifuna ukubhiyozela iminyaka eyi-100 yolawulo lukaYesu. Iyure nganye endiyishumayelayo iza kumela unyaka ngamnye wolawulo lwakhe!” Wazenza ezo yure. NgoJanuwari 2015, wabhaptizwa, yaye ngoku unguvulindlela ongumncedani.
ESri Lanka, oodade abane bahamba ngebhasi besiya kushumayela kumhlaba ongabelwanga bani owawunamaBhuda amaninzi. Ngosuku lwabo lwesibini beshumayela, imonki nomqhubi weteksi baza kubo belwile. Akuzange kube kudala, bangqongwa ligquba labantu elimalunga ne-30. Kwafika amapolisa aza ababamba, abavalela ubusuku bonke entolongweni ngaphandle kwesimangalo. Bavalelwa nezaphuli-mthetho ezikhohlakeleyo ezazibathuka, kodwa ukubakho kwabo entolongweni kwabanika ithuba lokushumayela. Omnye waba dade wathi: “Ndandivalelwe nababulali, kodwa ndakwazi ukuthetha nabo ngenyaniso. Yabamangalisa into yokuba ndibanjiwe ibe bandibuza imibuzo emininzi ngeenkolelo zam. Omnye wabo wandibuza, ‘Kutheni wonwabe kangaka?’”
ESri Lanka: Oodade abane bahamba ngebhasi ukuya kushumayela kumhlaba ongabelwanga bani
INkundla Ephakamileyo yaseSri Lanka iye yasamkela isimangalo sethu nxamnye namapolisa kuba anyhasha amalungelo ethu ngokusibamba ngaphandle kwesimangalo esivakalayo. Ityala liseza kuchotshelwa.
Ukunceda Ibhinqa Elingasakwazi Ukuphakama Ebhedini
UMichiko, udade onguvulindlela eJapan, wayeqhuba isifundo ngentetho yezandla nebhinqa eselikhulile esibhedlele. Lo dade wabuza abantu ababephangela apho ukuba zikhona na ezinye izigulane anokuncokola nazo. UMichiko wadibana noKazumi, owayesiva kodwa engakwazi ukuthetha. UKazumi wayengasakwazi ukuphakama ebhedini emva kwengozi yemoto awayifumana xa wayeneminyaka eyi-23. Wayengasakwazi ukuginya ukutya, nkqu nokusela amanzi. Wayenemibuzo emininzi yaye wasamkela ngoko nangoko isifundo seBhayibhile.
EJapan: UKazumi uyakunandipha ukubhala iileta ezikhuthazayo
UMichiko wayebuza imibuzo aze uKazumi akhombe iimpendulo esiqendwini okanye azibhale phantsi. Xa uKazumi wafumana iselfowuni, uMichiko wakwazi ukuxubusha itekisi yosuku kunye naye ntsasa nganye. Nakuba impilo kaKazumi yayisiya iwohloka, lona ukholo lwakhe lwalusomelela de wathi ufuna ukuba liNgqina kaYehova. Xa wayeneminyaka eyi-61, waba ngumvakalisi ongabhaptizwanga emva kokufunda iBhayibhile iminyaka eyi-13.
Kuba uKazumi engasakwazi ukuphakama ebhedini, ibandla lalisenza ilungiselelo lokuba akwazi ukumamela iintlanganiso kunye neendibano. Kwakusibakho oodade abohlukeneyo ababefunda amagqabaza akhe ezintlanganisweni.
UKazumi uye abhalele isifundo ngasinye esiyayo ezintlanganisweni ileta ekhuthazayo. Uye ashumayele kubantu abasebenza esibhedlele nakwabo baze kumbona. UKazumi uye abaxelele oku, “Ukuba ufunda iBhayibhile, uza konwaba.”
Imonki Ifunda Inyaniso
Kwilizwe elikuMzantsi-mpuma weAsia, omnye udade owayeye kugqirha wamehlo esibhedlele wadibana nemonki. Wayibuza, “Ngaba ungathanda ukuba ngumqabaqaba uze uphile ngonaphakade endaweni entle?” Baxubusha kamnandi yaye lo dade wayinika incwadana ethi Phulaphula uThixo. Wathatha inombolo yefowuni yale monki waza wayinika omnye umzalwana osebandleni. Akuzange kube kudala, lo mzalwana waqhagamshelana nayo waza wayimemela kwintetho ekhethekileyo. Le monki yazinandipha iintlanganiso, ngokukhethekileyo iingoma zoBukumkani, kwaye yachukunyiswa yindlela abantu abayamkela ngayo ngobubele.
Xa yabuza ukuba amaNgqina anawo na amaziko emfundo ephakamileyo, umzalwana wayicacisela ukuba siqhuba izifundo zeBhayibhile waza wacela ukuyiqhubela esayo. Kwiveki elandelayo, yayisele isigqibile isahluko sokuqala sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Yaqhubeka ifunda yaza yaqalisa ukuya kwiintlanganiso, iphendula nakwiSifundo seMboniselo.
Xa yaya kwindibano yesiphaluka, isithethi saseBheteli sayimema ukuba iye kutyelela eBheteli. Kwiveki elandelayo, yahamba iiyure ezilishumi isiya eBheteli, apho yafika yamkelwa ngobubele. Ekupheleni kukaFebruwari 2015, le ndoda yayeka ukuba yimonki yaye ngoku iyaqhubeka ifunda iBhayibhile kwaye ithabatha inxaxheba kwiintlanganiso zamaKristu.
Wayelahlekile Waza Wafunyanwa
Kutshanje, kuye kwathunyelwa oovulindlela emntla-mpuma Indiya, apho iindaba ezilungileyo zazisele zineeminyaka emininzi zingasashunyayelwa. Aba vulindlela bafumana abantu abaninzi abanomdla yaye babefuna ukukhangela indawo yokungenela iintlanganiso. Endleleni eya kwesinye isifundo, babona isakhiwo esasingekagqitywa yaye bacinga ngokubuzisa ngaso. Njengoko babesihla ngendlela baphinda bajika beyokubuzisa. Emva kweso sakhiwo, badibana nebhinqa elaliselikhulile baza balixelela ukuba bangamaNgqina kaYehova. Lavuya laza lathi, “Nam ndiliNgqina likaYehova.” Labamkela ngobubele ekhayeni lalo laza lababonisa iincwadi zentlangano zoo-1970 nezoo-1980. Lalifunde noovulindlela kwiminyaka eyi-30 ngaphambili kwaye lalikhe laya kwezinye iintlanganiso nakubeni umyeni walo wayechasa. Laliqinisekile ukuba liyifumene inyaniso kodwa emva kokuba kumke oovulindlela kwindawo elihlala kuyo, zange likwazi ukunxibelelana nentlangano. Bonke abantwana balo baba ngamalungu eecawa, kodwa lona lala ukuya ecaweni.
EIndiya: Ibhinqa elinomdla libonisa ngeencwadi zentlangano zoo-1970 nezoo-1980
Abantwana balo babeqalise ukulinyanzela ukuba libe lilungu leCawa yamaKatolika ukuze xa lifile lingcwatywe ngawo. Udade walo walinyanzela ukuba baye kwicawa yamaKatolika ukuze liye kujoyina, kodwa babanjezelwa ziimoto endleleni kwanyanzeleka ukuba bajike babuyele ekhaya. Udade walo wathi bazoya ngosuku olulandelayo kodwa wagula. Kwakungolo suku kanye eladibana ngalo naba vulindlela! Ngoku lifunda iBhayibhile kwakhona, liyaya kwiintlanganiso kwaye likhuthaza abantwana nabazukulwana balo ukuba bafunde.